पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता देखिएका थिए लोकबहादुर, पत्रकारहरुको प्रश्नमा के दिए जवाफ ? « Gaunbeshi
पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता देखिएका थिए लोकबहादुर, पत्रकारहरुको प्रश्नमा के दिए जवाफ ?
प्रहरीसमक्ष दिएको प्रारम्भिक बयानमा लोकबहादुरले उक्त दिन वरिपरि भएका सबैलाई मा’र्ने योजना बनाएको बताएका छन् । प्रहरीसमक्ष लोकबहादुरले भनेका छन्, ‘मेरो टा’र्गेट र रि’स भनेको काका ९तेजबहादुर० मात्रै हुन्, तर मैले हा’नेको देखेपछि सबैलाई हा’नेको हुँ । अरूले देखेको भए अरूलाई पनि हान्थे र मा’र्थेँ ।’
आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्ति कार्की परिवारकै आफन्त रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक अरुणकुमार बिसी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० लगायतको टोली खटिएको थियो।